घरमा चामल नभएर ३ महिनाको बच्चालाई भोकै राख्ने अवस्थासम्म आएको थियो : श्री नेहा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
घरमा चामल नभएर ३ महिनाको बच्चालाई भोकै राख्ने अवस्थासम्म आएको थियो : श्री नेहा
मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकसम्म आएका व्यक्तिको संरक्षण स्थल हो, ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको नेपाली स्नेही काख । यो संस्था २०६७ सालदेखि श्रीनेहा पोखरेलले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। १६ वर्षको उमेरदेखि नै यो संस्था सञ्चालन गर्दै आएकी उनले आफ्नो सबै कमाई यसैमा लगाएकी छिन्।
श्रीनेहा पेसाले एक मोडल हुन्। म्युजिक भिडियो र नाटकमा अभिनय गरेर आएको रकम उनी सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरुका लागि खर्च गर्छिन्। नृत्य प्रशिक्षक भएर पनि उनले थुप्रै वर्ष काम गरिन्। आठ कक्षा पढ्दादेखि नै नृत्य प्रशिक्षक भएर काम गरेकी उनले एक दर्जन म्युजिक भिडियो र विभिन्न नाटकहरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन्।
अहिले हाल भने उनलाई एउटा कुराको मात्र चिन्ता छ र त्यो हो उनको नेपाल स्नेही काँख। संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे मात्र उनको ध्यान गएको छ, कतैबाट कसैको सहयोग पाउन पाए संस्थामा रहेका व्यक्तिका लागि केही राहत मिल्ने छ।
अहिले संस्थामा २० देखि ६० वर्ष उमेर समुहका धेरै जना मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिले संरक्षण पाइरहेका छन्। उनीहरुको खाने बस्ने व्यवस्था र महिना महिनादिनमा लाग्ने उपचार खर्च पनि उनी एक्लैले व्यहोर्दै आएकी छन्। उनलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरु पनि बिस्तारै बढिरहेका छन्।
ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको यो संस्था अहिले भाँडाको एउटा टहरामा सञ्चाल हुँदै आएको छ। मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति बस्नका लागि कसैले भाँडामा घर दिन नमान्दा टहरोमै संस्था सञ्चालन गरेको उनको पीडा छ। टहराको पनि निकै नाजिक अवस्था छ। उनले भनिन्,'पानी आउँदा छानो चुहिन्थ्यो, हिले छानो त टाल्न सफल भएको छु। तर पनि अझै पानीको समस्या छ। अब एउटा गतिलो आवासको खाचो छ।'
यस्तो अवस्था हुँदा पनि उनले हिम्मत हारेकी छैनिन्। उमेरले कलिलै भएपनि काम गर्न सक्छु भन्ने अठोट अझै जिवित रहेको उनको भनाइ छ। जबसम्म आँफू रहिन्छ तबसम्म समाज सेवा गर्न नछोड्ने उनको अठोट छ।
भर्खरै मात्र नेपाल स्नेही काखले आफ्नो आठौ वार्षिक उत्सव मनाएको छ। उक्त समारोहमा आफ्नो भाव व्यक्त गर्दै उनले भनिन् ,'सबै प्रति मा आभारी छु। मैल काम होइन आफ्नै घरको परिवार सोचेर यहाँ सेवा गरिरहेको छु। हजुरहरु सबैले मलाई साथसहयोग दिरहनु भएको छ। धेरैले मलाई सहयोग गर्ने आस्वासनमा भित्रि वस्त्रको साइज पनि सोधे, पर्सनल कुरा पनि मागे। तर म झुकिन। आइपरेका बाधा अर्चनसँग जुद्दै यहाँ सम्म आइपुगेको छु। यहाँ सम्म आइपुग्नुमा पनि हजुरहरु सम्पूर्णको महत्वपूर्ण भूमिका रहको छ।'